Edozi Ike egwu M4A faịlụ na Windows Media Player
1 Play Nsogbu
1.4 Play DVD
1,12 Fim Ọ dịghị Sound
1,13 Player-adịghị arụ ọrụ
1.14 3 Solutions Play Nsogbu
2 Basic Iji Atụmatụ
Ma gụọ 2.3 Player ngwa mgbakwunye
2.4 Lyrics ngwa mgbakwunye maka Player
2.5 Error c00d11b1
2.7 Error c00d1199
2.8 rụkwaa Player
2.9 Player mkpọka
2,11 Skin maka Player
2.12 Player maka Windows 7
2,13 Player Update
2,14 Player 2015
2,15 Player Alternative
3 arụ Nkà
3.1 Download Music ka Player
3.2 Tinye Music ka Player
3.3 Ọkụ DVD na Player
3.5 Player ndepụta okwu
3,10 Player Uzo mkpirisi
Part 1: Gịnị Windows Media ọkpụkpọ nwere ike agaghị akpọ M4A?
Nkebi nke 2: Olee otú igwu egwu M4A ndọtị faịlụ na Windows Media ọkpụkpọ?
M4A bụ ihe ọdịyo faịlụ ndọtị. Itinye na koodu na AAC ma ọ bụ elu nzuzo mkpakọ, na M4A faịlụ ndọtị e wepụtara na ebumnuche na-aga nke ọma nke ukwuu na-ewu ewu MP3 faịlụ extensions. Ma ndị a faịlụ extensions bụ maka ọdịyo faịlụ naanị. The MPEG 4 faịlụ nke naanị nwere audio na-adịkarị nyere M4A ndọtị. Mgbe tụnyere ndị nkịtị faịlụ MP3, M4A faịlụ nwere mma ụda àgwà na ndị na-emekarị nta na-aba. Ndị a M4A faịlụ nwere ike mfe keere na ọ bụla music ọkpụkpọ.
Site ndabara, M4A faịlụ ndọtị na-adịghị akwado site na Windows media ọkpụkpọ. The M4A faịlụ na-emekarị na koodu na AAC nke utịp ke "lossy" mkpakọ nke bụ otu n'ime ndị isi ihe mere n'azụ enweghị ike nke Windows Media Player na-egwu dị otú ahụ faịlụ.
Ị na-agbalị na-egwu M4A faịlụ gị Windows Media Player? Ọfọn, ma ọ bụrụ na gị ike, ị na-emeghe dị otú ahụ faịlụ gị mgbasa ozi ọkpụkpọ. N'agbanyeghị eziokwu na Windows Media Player anaghị akwado M4A faịlụ; ị ga-maa chọrọ emeghe gị faịlụ na mgbasa ozi ọkpụkpọ. E nwere ihe abụọ bụ isi ngwọta na nwere ike ịbịa ka gị na nnapụta dị otú ahụ a dịruru ná njọ:
Ngwọta 1: Upgrading gị windows mgbasa ozi ọkpụkpọ
Ọ bụrụ na ị chọrọ n'ezie na-egwu gị M4A faịlụ na Windows Media Player, ahụ na-agbalị ibudata ọhụrụ version nke ọkpụkpọ. Bụrụ na ọ bụghị ndị ọhụrụ, na-agbalị ibudata Windows Media Player 11 nke na-agụnye nkwado zuru ezu maka M4A faịlụ. Niile ọhụrụ nsụgharị nke Windows Media Player nkwado M4A faịlụ na nwere ike igwu ha flawlessly.
Ngwọta 2: tọghata M4A faịlụ ka Windows Media Player dakọtara faịlụ
Ihe mere Windows Media Player bụ enweghị ike na-egwu M4A faịlụ bụ n'ihi na nke incompatibility na ọkpụkpọ. The M4A faịlụ ndị na-emegide Windows Media Player na N'ihi ya, otu ga-ekwe omume ngwọta nwere ike ịbụ iji tọghata ndị a faịlụ n'ime Windows Media Player dakọtara faịlụ. E nwere dị iche ngwaọrụ dị na ahịa na ike tọghata gị M4A faịlụ n'ime Windows Media Player dakọtara faịlụ.
Wondershare Video Ntụgharị kacha bụ nke zuru okè ngwá ọrụ dị na ahịa na ike mfe tọghata gị M4A faịlụ n'ime Windows Media Player dakọtara faịlụ. Ọrụ enyi na enyi, free nke na-eri na elu arụmọrụ ụfọdụ n'ime ihe ndị mere ndị na-ahọrọ wondershare video Ntụgharị kacha n'elu ọ bụla ọzọ Ntụgharị dị na ahịa.
Ndị bụ isi na uru nke na-eji wondershare video Ntụgharị kacha agụnye ngwa ngwa faịlụ akakabarede, ala nke iji, customizable na nkwado n'ihi na ihe karịrị puku anọ faịlụ formats.
Olee otú iji tọghata M4A faịlụ n'ime Windows Media Player dakọtara faịlụ?
Nzọụkwụ 1: Download wondershare video Ntụgharị kacha
Ị nwere ike ibudata a dị ike faịlụ akakabarede ngwá ọrụ site ebe a. The software bụ kpam kpam free na-agba na ma Mac na Windows n'elu ikpo okwu. Wụnye software mgbe nbudata ya.
Nzọụkwụ 2: tọghata M4A ka Windows Media Player dakọtara video
Iji wondershare video Ntụgharị kacha, ị nwere ike tọghata gị M4A faịlụ n'ime ihe ọ bụla usoro. The Mmepe na lekwasịrị anya na-eme ọrụ enyi na enyi software. Ị nwere ike tọghata gị M4A faịlụ n'ime ihe ọ bụla ọzọ Windows Media Player dakọtara faịlụ dị nnọọ site na-esonụ atọ mfe nzọụkwụ:
1. Site onye ọrụ interface, họrọ "Tinye faịlụ" bọtịnụ emeghe gị M4A faịlụ na window. Ị nwere ike ịhọrọ ọ bụla ọdịyo ma ọ bụ video faịlụ. Mgbe ị pịa "Tinye faịlụ", a faịlụ nchọgharị ga-egosi ebe ị nwere ike họrọ faịlụ na ị chọrọ iji tọghata. Otú ọ dị ma ọ bụrụ na ị na-achọghị iji faịlụ nchọgharị, ị nwekwara ike nanị ịdọrọ na dobe M4A faịlụ na ị chọrọ iji tọghata.
2. Na nri akuku nke ihuenyo, ị ga-ahụ mmepụta format ngalaba. Nkebi a depụtara niile formats nke i nwere ike tọghata gị M4A faịlụ. Wondershare Video Ntụgharị kacha akwado a ọnụ ọgụgụ nke formats gụnyere AVI, WMV, MP3, MOV wdg Họrọ usoro nke na ị chọrọ gị faịlụ ina converted.
3. Ozugbo i ji n'aka na faịlụ ka converted na usoro ziri ezi, pịa na tọghatara bọtịnụ na ala nri akuku nke ihuenyo. Gị faịlụ ga-kama converted n'ime ndị chọrọ usoro.
Nzọụkwụ 3: Play M4A na Windows Media Player
Mgbe ị ọma converted gị M4A faịlụ n'ime windows medial ọkpụkpọ dakọtara faịlụ, ị nwere ike mfe kpọọ ya na ọkpụkpọ.
4 Atụmatụ banyere ndepụta okwu na Windows Media Player
Edozi-Can't play .mov faịlụ na Windows Media Player 12/11 / 10etc
2 ụzọ na-egwu DVD na Windows Media Player
3 Atụmatụ banyere Windows Media Player 64 bit
2015 Solvedwindows mgbasa ozi ọkpụkpọ dịghị ụda
3 Atụmatụ maka redio Fans ka maka iji windows mgbasa ozi ọkpụkpọ
Edozi-Can't play 3GP faịlụ na Windows Media Player 12/11 / 10etc
3 Solutions ka Windows Media Player nsogbu na-egwu egwu faịlụ
2 ụzọ na-egwu FLAC na Windows Media Player
> Resource> WMP> Edozi Ike egwu M4A faịlụ na Windows Media Player